Akụkọ - ezuru ezumike n'aka ọrụ
Site na nkwalite echiche nke imewe gburugburu ebe obibi, anyị amalitela ilekwasị anya n'ọkwa dị elu nke ịhụnanya na inwe, nkwanye ùgwù na nghọta onwe onye. Ma n'oge ezumike ma ọ bụ n'ehihie mgbụsị akwụkwọ dị jụụ, ihe kacha mma bụ itinye tebụl rattan na oche na nche anwụ anwụ. na mbara ihu ma ọ bụ obere yard. Iji were ikuku ọhụrụ, nwee otu iko tii na-esi ísì ụtọ; Gụọ akwụkwọ akụkọ na-atọ ụtọ ịhụnanya nke ndụ.
Ngwá ụlọ dị n'èzí na-enye ohere nkeonwe
We bi na "igbe ciment" ogologo oge ka ụlọ ahụ laghachi na okike, ya mere, anyị nwere ogige, nke na-abụghị eserese ma ọ bụ ikpo ọkụ mahogany dị oké ọnụ ahịa nwere ike dochie ya. Na-ebi n'ime obodo "nduru nduru", nke a dị oke ọnụ ahịa maka obere oghere maka "mmekọrịta chiri anya" na okike.
Ngwá ụlọ dị n'èzí ga-aba uru. Site na njirimara nke ngwá ụlọ dị n'èzí, ọ nwere ike ịghọ ohere nke onwe gị, nke ga-eme ka ị nwee obi ụtọ zuru oke onyinye nke okike.
Kacha fastidious maka ewu a onwe ohere site n'èzí ngwá ụlọ ka na-achọ pụtara ìhè individuation, bụghị nanị gụnyere mma style , oke nke n'èzí ngwá ụlọ na-adabere na gị mkpa.
Ọ bụrụ na naanị otu mbara ihu n'ụlọ, nwere ike họrọ osisi ma ọ bụ rattan n'èzí ntụrụndụ table nke dakọtara na ime ụlọ na agba ma ọ bụ na-abụghị, na-ahazi abụọ square stool na tinye obere osisi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ole na ole n'akụkụ ya, ka mbara ihu ahụ pụtakwuo mbara, nwekwara ike ịmepụta echiche Siheyuan.
Nkasi obi sitere na ngwá ụlọ dị n'èzí na-enye
Nkasi obi dị oke egwu nke arịa ụlọ dị n'èzí dị ka nnabata na-ekpo ọkụ nke nne na nna nyere nwa. Site na imewe isi nke ngwá ụlọ dị n'èzí, anyị nwere ike igosipụta nlekọta nke ọma nke ndị mmadụ site na ngwá ụlọ dị n'èzí, ka ngwaahịa ahụ gbanwee na ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike. Kwe ka ị were oge ntụrụndụ iji nụ ụtọ ntụrụndụ site na ọrụ n'aka.
Mgbe ntụrụndụ, ọ na-aṅa ntị na uto na nka echiche. Klas ụlọ n'èzí ga-emetụtakarị ọnọdụ gị ma mbara ihu, ubi ma ọ bụ n'akụkụ oké osimiri. Ngwongwo ụlọ dị elu nke dị n'èzí nwere ike inye gị ihe ụtọ anyat n'agbanyeghị na imewe, ihe ma ọ bụ workmanship.The eke mma, ọnụ na elu klas imewe, karịsịa na-egosi elu àgwà ndụ obi ụtọ na obodo ndụ.
A haziri arịa ụlọ dị n'èzí Sun Master iji jikọta arịa ụlọ n'èzí na gburugburu n'èzí wee malite mgbanwe site na ime ụlọ gaa n'èzí.
Oge nzipu: Jun-15-2021